Free Online Dating - zacki is a 33 year old African man from Wisconsin United States - SixSingles.com
Age: 33 Gender: Male Race: African Location: no Wisconsin United States
iam a good person and single i like to meet knew people Talaado, December 13, 2011 (HOL) − Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Somalia ayaa sheegay inay maanta ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee Muqdisho kulan ay codka kalsoonida ah ugu qaadayaan guddoomiyaha baarlamaanka, Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Mudanayaashan ayaa waxay sheegeen inay kulankooda ku wargeliyeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, uuna u ballanqaaday in ammaankooda la sugayo inta uu socdo kulankooda oo ay uga doodi doonaan marka hore mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baalamaanka.
"Xildhibaannada sharciga jecel waxay maanta ay kulanka ku yeelanaynaa xarunta golaha shacabka, kaasoo looga doodi doono mooshin ka dhan ah afhayeenka baarlamaanka," ayuu yiri xildhibaan Saleebaan Maxamed Ibraahim oo saxaafadda la hadlay.
Mudanuhu wuxuu intaas ku daray in guddoomiyaha baarlamaanka lagu soo eedeeyay xil gudasho la'aan iyo inuu ku xadgudbay sharciga u yaalla baarlamaanka, ayna yihiin qodobbada ay diiradda ku saarayaan kulankooda maanta.
"Heshiiskii Kampala waxaa saldhig u ah dastuurka, guddoomiyuhuna dastuurka ayuu ku xad-gudbay waana sharci in laga keeno mooshin," ayuu yiri xildhibaanka oo ka jawaabayay hadal kasoo baxay mudanayaal taageersan afhayeenka baarlamaanka oo shalay kulan ku yeeshay Muqdisho.
Dhanka kale, xildhibaan Mowliid Macaani iyo xildhibaan Cawad Axmed Casharo oo labadaba ku sugan Nairobi ayaa waxay sheegeen inay taageersan yihiin kulanka loogu qaadayo codka kalsoonida guddoomiyaha baarlamaanka.
"Xildhibaankii doonaya inuu difaaco Shariif Xasan waa inuu ku difaaco codkiisa, balse ma ahan inay meelaha ka qayliyaan," ayay yiraahdeen labadan mudane oo sheegay inay jiraan mudaaharaadyo ka dhan ah Shariif Xasan oo maanta lagu wado inay ka dhacaan dalka Talyaaniga.
Murankan u dhexeeya xildhibaannada ayaa wuxuu sare u sii qaadayaa khilaafka u dhexeeya xildhibaannada baarlamaanka, iyadoo weli uusan ka hadlin guddoomiyuhu khilaafyada cirka isku sii shareeraya ee u dhexeeya baarlamaanka.
Madaxweynaha Kenya oo sheegay inaysan ku duulin Soomaaliya, balse ay la dagaalamayaan Al-shabaab oo khatar ku ah
13/12/2011 1:47 AM EST
Talaado, December 13, 2011 (HOL) − Madaxweynaha dalka Kenya, Mwai Kibaki oo ka hadlayay maalinta xorriyada dalka Kenya oo shalay ka dhacday dalkaas ayaa sheegay inaysan weerarin Soomaaliya, balse qorshihii ay u galeen uu yahay inay la dagaalamaan Al-shabaab oo khatar ku ah sida uu yiri ammaanka iyo dhaqaalaha dalkiisa.
Dagaal Ciidamada Dowladda Soomaaliya, Kuwa Kenya iyo Al-shabaab ku dhexmaray Gobolka Jubbada Hoose
13/12/2011 1:45 AM EST
Talaado, December 13, 2011 (HOL) − Dagaal u dhexeeyay xoogagga Xarakada Al-shabaab iyo ciidamada dowladda KMG ah oo kaashanaya kuwa Kenya ayaa xalay ka dhacay deegaanka Taabto ee gobolka Jubbada hoose, inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay.
Xarakada Al-shabaab oo xukun gacan goyn ah ku fulisay laba Wiil oo Dhallinyaro oo lagu eedeeyay Xatooyo
13/12/2011 1:44 AM EST
Talaado, December 13, 2011 (HOL) − Maamulka Xarakada Al-shabaab deegaanka Lafoole ee duleedka Muqdisho ayaa Isniintii shalay ku fulisay laba wiil oo dhallinyaro ah xukunno looga jaray mid walba qaybta hore ee gacantiisa midig, kaddib markii ay maxkamaddu sheegtay in lagu helay dambi xatooyo ah.
iam looking a good people not bad people or good women Talaado, December 13, 2011 (HOL) − Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Somalia ayaa sheegay inay maanta ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee Muqdisho kulan ay codka kalsoonida ah ugu qaadayaan guddoomiyaha baarlamaanka, Shariif Xasan Sheekh Aadan.